Samsung Galaxy S8 ayaa baabiin doonta qalabka dhageysiga dhagaha oo wuxuu qaadan doonaa isku xiraha USB-C | Wararka IPhone
Samsung Galaxy S8 ayaa baabiin doonta qalabka dhageysiga dhagaha oo wuxuu qaadan doonaa isku xiraha USB-C
Maaddaama ay soo dhowaatay taariikhda la filayo in la soo bandhigo Galaxy S8, oo lagu qorsheeyay qaab-dhismeedka Shirweynaha Caalamiga ah ee Mobile-ka oo la qaban doono dhammaadka bisha Febraayo ee sannadka soo socda, waxaa jira warar isa soo taraya oo la xiriira terminaalkan oo la daabacayo isla markaana si ficil ah loo xaqiijiyay. Mid ka mid ah kuwa qaatay awoodda ugu badan maalmihii la soo dhaafay waxay la xiriirtaa ka saarista qalabka dhegaha ee S8, iyadoo la raacayo moodada qaar ka mid ah soo saarayaasha Android, kuwaasoo tirtiray ka hor intii aan la bilaabin iPhone 7, wax walba waa in la sheegaa.
Ka hor inta aan iPhone si rasmi ah loo soo bandhigi doonin, labadaba Motorola iyo Oppo waxay bilaabeen dhowr terminal halkaas oo xarka 3,5 mm Waxay ahayd gebi ahaanba la waayey, in kasta oo ay u muuqato inay runti ahayd Apple oo hal-abuurnimo ku samaysay arrintan. Qaabkan ma dhihi karno, in kastoo aan awoodno, in Samsung ay dayanayaan Apple arrintan la xiriira. Macluumaadkan waxaa lagu daabacay bogga SamMobile, oo ah shabakad ku takhasustay boosteejooyinka shirkadda Kuuriya, sidaa darteed macno badan ayay samaynaysaa waxayna u badan tahay inay run tahay.
Riwaayado kale oo u muuqda inay ka yimaadeen gacanta Galaxy S8, ayaa ah isdhexgalka badhanka guriga shaashadda gudaheeda, si ay shirkaddu u ballaadhiso cabirka shaashadda iyada oo aan la xadidin badhanka muuqaalka caadiga ah, sida Apple oo leh iPhone. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale adeegsan laheyd xiriirka USB-C, oo ah shuruud looga baahan yahay dhammaan shirkadaha taleefannada ee aaladaha cusub ku soo bandhiga suuqa.
Laakiin waxa soo jiidan doona dareenka ugu badan ayaa noqon doona is dhexgalka kaaliyaha Viv, waxaa abuuray shaqaalihii hore ee naqshadeeyay Siri, laakiin markay arkeen doorka ay Apple ka siineysay gudaha nidaamka mobilada, waxay ku qasbanaadeen inay ka baxaan shirkadda oo ay abuuraan kaaliye aad uga wanaagsan Siri, halkaas oo is dhexgalka nidaamka iyo codsiyada ay wada yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Samsung Galaxy S8 ayaa baabiin doonta qalabka dhageysiga dhagaha oo wuxuu qaadan doonaa isku xiraha USB-C
Apple Music waxay dhaafeysaa 20 milyan oo adeegsadeyaal ah
Ogeysiis cusub oo ah iPhone 7 Plus oo ay la socdaan qaar ka mid ah dhalinyarada Romeo iyo Juliet